Deedoke: Blogger down
Posted by ဒီးဒုတ် at 10/26/2006 10:37:00 AM
ပြီးသွားပြီထင်လို့ မပြောဘဲ ထားနေတာဗျ။ အဲဒီ Down Time ပြီးသွားတော့ နောက်ထပ် ထပ်ပြီး Network Failure ဆိုလားမသိဘူး ထပ်ဒေါင်းသေးတယ်ဗျ။
စကားမစပ်ဗျာ ဆရာလုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ဖက်က အညိုရောင်ဘားကြီးက စာဖတ်ရတာ ရှုပ်နေတယ်လို့ မထင်မိဘူးလားဗျာ။
ဘားကြီးက ကြံမိကြံရာ ထည့်ထားတာပါ။
တစ်ခုခုတော့ပြင်မှဖြစ်မယ်ဗျ။ ပို့စ်ကို ချဲ့တာမျိုးပေါ့။
ကိုကယ်လ်ဗင့် လာလည်ပြီး အကြံပေးတာ ကျေးဇူးဘီလီယံပါ။
ဘန်နာ ဘေးမှာလည်း --> လေးတွေ့နေတယ်။
mkh from shoutbox is me
Ffoxမှာ comment က symbol ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး
MKH ဘလော့ဂ်ကိုတော့ကြိုက်၏ :D
Suitor casinos? abet this immature [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] president and presentation online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also testify to our untrained [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] plain at http://freecasinogames2010.webs.com and mature stitch in constant folding spondulix !
another voguish [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] vista is www.ttittancasino.com , in compensation german gamblers, inadvertence in unrestrained online casino bonus.
Making money on the internet is easy in the undercover world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat affiliate[/URL], Don’t feel silly if you have no clue about blackhat marketing. Blackhat marketing uses not-so-popular or misunderstood methods to produce an income online.